सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो सिमामा भारतियले बनाएका घरटहरा ! – Life Nepali
सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो सिमामा भारतियले बनाएका घरटहरा !
(सुनसरी) र (मोरङ) — सुनसरी र मोरङमा दशगजा मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन नेपाल र भारतले संयुक्त अभियान थालेका छन् । तीन दिनयता नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) मिलेर दशगजा खाली गराइरहेका छन् । अहिलेसम्म नेपालतर्फबाट बनाइएका दर्जनजति र भारततर्फका आठवटा घर–टहरा भत्काइएका छन् । १ कठ्ठा १० धुरजति जमिनमा लगाइएको तरकारी र केराखेती नष्ट गरिएको छ ।
सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–४ इटरी र भारततर्फ अररिया, सोनापुर ग्रामपञ्चायत–१७ गुवारपुच्छीमा १८५ नम्बरदेखि १८४ नम्बरको मुख्य सीमास्तम्भसम्मको अतिक्रमण हटाइएको हो । यसका लागि सशस्त्रका १३ र एसएसबीका पाँच जना खटिएका छन् । शुक्रबार बर्जु–३ मा सात स्थानका घरटहरा भत्काइयो । दुवैतर्फका अधिकारीको संयुक्त निर्णयबाट दशगजाका घरटहरा हटाएर खेती नष्ट गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण ढकालले बताए । दशगजा क्षेत्र भारत र नेपालको सिमाना हो । दशगजाको बिचमा रहेको स्तम्भबाट नेपालतर्फ ३० र भारततर्फ ३० गरी ६० फिट जमिन खाली राख्नुपर्छ ।
एसएसबी र सशस्त्रले यसअघि बर्जु–४ का १५ स्थानमा दशगजाको अतिक्रमण हटाएको एसपी ढकालले जानकारी दिए । यसअघि बिहीबार सुनसरीको साहेबगन्जबाट सशस्त्र प्रहरी बलका निरीक्षक श्यामबाबु राय यादव नेतृत्वको टोली र एसएसबीको ५६ बटालियन ए कम्पनी पथदेवाबाट एएसआई मूलराज शर्माको टोलीले संयुक्तरूपमा घर–टहरा हटाएको थियो । बर्जु–४ इटरी बस्ने महेश मेहता, पडाडी ठाकुर, भगवान ठाकुर, रामदेव मेहता, उमान्द ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर, रमेश मेहता, तेजनारायण मण्डल, रामानन्द मण्डल, किशन मण्डल र कोइथु मण्डलले बनाएको ”सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा दशगजा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउँदै सशस्त्र प्रहरी बल । तस्बिर : प्रदीप/कान्तिपुर
घर–टहरा, तरकारी बाली तथा केराखेती हटाइयो,’ एसपी ढकालले भने । एसएसबीले भारततर्फ बरामकिशन मेहता, सदान्न मेहता र महम्मद मनसुरका घरटहरा भत्काएको जानकारी दिँदै उनले अझै दसगजा मिचेर बसिरहेकाहरूलाइ त्यहाबाट हट्न एक साताको अल्टिमेटम दिएको बताए । स्थानीइले जानीजानी दशगजा अतिक्रमण गरेको नभई उनीहरूमा अन्तर्राष्ट्रियमा सीमाको महत्व र संवेदनशीलताको ज्ञान नरहेको उनको भनाइ छ ।
सुनसरीमा २३ वटा सीमास्तम्भ हराएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कोशी र बर्जु गाउँपालिकामा पर्छन् । बिहीबार मात्र हराएको भनिएको एउटा सीमास्तम्भ बर्जुमा बालुवाले पुरिएको अवस्थामा फेला परेको ढकालले बताए । ‘सीमास्तम्भ नै हराएपछि र पुरिएपछि जताततै अतिक्रमण भएको छ, यसबाट सुनसरी र मोरङमा दशगजा क्षेत्र पहिचान गर्नसमेत मुस्किल भएको छ,’ उनले भने, ‘हराएका सीमास्तम्भको खोजी र फेला नपरेका ठाउँमा नयाँ राख्न दुवै मुलुकका सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
सीमा मिचेर खेती
मोरङको जहदा गाउँपालिका ७ तरिगामास्थित दशगजा क्षेत्र ओगटेर भारतीयले घर बनाएर बसोबास गरिरहेका छन । १ सय ७४ पिपि ६२ नम्बरको ठूलो पिलर भारतीयको आँगनमा छ । भारतीय नागरिकले दशगजामै ढलान सडक र मन्दिर पनि बनाएका छन् । यसैगरी उनीहरूले दशगजा क्षेत्रमै खेती पनि गर्ने गरेका छन् । स्थानीय जगदिस साहले भारतीयहरूले पटक पटक दशगजा अतिक्रमणको प्रयास गर्दै आएको बताए । ‘अतिक्रमण रोक्न खोज्दा भारतीयसँग पटकपटक विवादसमेत हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विवाद हुँदा भारतीयले सीमा क्षेत्रका नेपाली गाउँमा चोरी गराइदिने गरेका छन् ।’
नेपालतर्फ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएको फाइदा उठाउँदै तरिगामामा भारतीय पक्षले दशगजामै सडक बनाएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘भारतीय एसएसबी चौबीसै घण्टा सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको हेर्छु तर हाम्रो महिना, दुई महिनामा कहिलेकाहीँ सशस्त्र प्रहरी एकछिनका लागि आउने गरेका छन्,’ स्थानीय उमेश कुमारले भने, ‘भन्सार र प्रहरी चौकी माओवादी जनयुद्धकै बेला उठेर गएदेखि अहिलेसम्म आएको छैन ।’
केही दिनअघि मोरङमा ५ वटा प्रहरी चौकी स्विकृत भएकोमा एउटा तरिगामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले बताए । अब केही दिनमै प्रहरी खटिएर जाने उनको भनाइ थियो । जहदा गाउँपालिकामा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पका लागि जग्गा अभाव भएकाले एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमै क्याम्प राख्न बाध्य भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्रबहादुर कार्कीले बताए ।
यस्तै, विराटनगर महानगरसँग जोडिएको दशगजा क्षेत्रमा भारत सरकारले विद्युतीकरण गरेर आफ्ना नागरिकलाई विद्युत आपुर्ति गर्दै आएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयनजिक दशगजामै भारतीयले बिभिन्न संरचना निर्माण गरेका छन् । गत बर्ष भारतीय भन्सारले दशगजामै भवन निर्माण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले भत्काएको कार्कीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको ६३ दशमलव २ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमध्ये भारतीयले १४ ठाउँमा दशगजा ओगटेर घरटहरा बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए । जिल्लामा सानो, मझौला र ठूला गरी १ सय २३ वटा सीमास्तम्भ रहेको उनले बताए । दशगजामा अब १/२ वटा मात्रै पिलर बनाउन बाँकी रहेको भुजलले जानकारी दिए । ‘धेरै पहिलेदेखि दशगजा क्षेत्रमा भारतीयहरू घर टहरा बनाएर बसेका छन् । अहिले नयाँ घर टहरा निर्माण गर्ने क्रम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘दुई पक्षीय बैठकमा आ–आफ्नो माथिल्लो निकायमा पहल गरेर दशगजाको अतिक्रमण हटाउने सहमति भएको छ । -कान्तिपुर
Previous कुनै कुनै महिलामा सन्तान नहुनुको मुख्य कारणहरु यस्ता छन् !
Next नेपालले जारी गर्यो भारतले अ’तिक्रमण गरेको सबै भूभाग समेटेर नयाँ – सेयर गरौ !